Abavelisi bebhotile yePC kunye nababoneleli - China Ibhotile yePC yebhotile
ISatifikethi kunye neNgxelo yoVavanyo
Ingxowa yeSoft epholileyo encinci
Ubhaka omkhulu opholileyo
Indawo yokuVula enkulu yeBlderder
Amanzi amancinci okuvula isinyi
Manzi Bag & ubhaka
Ingxowa yokuntywila emanzini
Ingxowa ye-Duffel engamanzi
Okungangenwa Camping ubhaka
Ukuloba kunye neBhokisi yezixhobo
Ibhokisi yokuLoba yokuLoba
Ukuprintwa kweBhokisi yokuLoba
Hydration isinye Ingxowa
Ibhotile yaManzi yeZemidlalo
Iibhegi ezincinci ezipholileyo
Ukuphola okuphakathi okuphakathi
Indawo enkulu yokugcina ivula isinyi
Isinyi esincinci samanzi sokuvula
Shower bag yamanzi
Ibhegi manzi & ubhaka
Ingxowa yokuntywila engenamanzi
Ibhegi duffel manzi
Ubhaka Camping manzi
Ibhokisi yokuloba ethafeni
Ukushicilela ibhokisi yokuloba
Isikhwama se-Hydration bladder
I-Buckle Mountaineering Bag yokuhamba kwengxowa
Indawo epholileyo yokuphola intaba yangaphandle
Camping Ice kupholile okungangenwa
Ephathekayo Ice kupholile AKA yangaphandle
Ingxowa ebandayo epholileyo engenamanzi
Ibhotile yamanzi ezemidlalo yangaphandle
Ibhotile yamanzi ephathekayo yezemidlalo yangaphandle. Ingabekwa ngokulula kwingxowa yesinqe, kwaye ubhaka ungagcwalisa ukufuma nangaliphi na ixesha naphi na. Uyilo lwecompact alubangeli mthwalo kulo msebenzi.
Fitness Bottle Eco Friendly ekumgangatho ophezulu Ibhotile yaManzi
Ibhotile yamanzi yezemidlalo yangaphandle eyenziwe ngezinto ezinokusingqongileyo ilula, kulula ukuyiphatha kwaye kulula ukuyisebenzisa kuneebhotile eziqhelekileyo zamanzi. Ilungele uninzi lwemidlalo yangaphandle efuna i-hydration ekhawulezayo. Njengokubaleka, ukunyuka, ukomelela, uqeqesho njalo njalo. Kukwalungele nokusingqongileyo, kusetyenziswa izixhobo zokutya kwaye akukho BPA.
Iibhotile zeBhola zeBhola eziPhandle kunye nokuPhathwa
Ibhotile yezemidlalo yangaphandle enesiphatho nesigqubuthelo sothuli, esinganikezeli nje kuphela ngokulula kodwa sikwaphucula nokhuseleko. Xa kuthelekiswa neeketile eziqhelekileyo, zomelele ngakumbi, zikhuselekile kwaye zithembekile, kwaye zilungele i-inshurensi. Ilungele imidlalo yezangaphandle okanye ukusetyenziswa kwabafundi. Umthamo ophakathi we-500 ml. Kulula ukuphatha xa uhlangabezana neemfuno zokuhambisa amanzi.
Iibhotile zePlastiki zePlastiki zokuSela eziSulungekileyo
Ibhotile enkulu yemidlalo enesiphatho se-silicone. Umzimba wekomityi unoyilo olume nge-arc, umzimba wendebe ujikeleze, imigca igudile, kwaye uyilo lwe-ergonomic lusemgceni. Umbhobho wokufunxa uxhotyiswe ngesigqubuthelo sothuli, esikhuselekileyo nesicocekileyo.
Ibhotile yezeMidlalo iBPA yeBhayisikile yokuSebenza ngokuSimahla
Ibhotile enkulu yemidlalo eyi-1000ml. Iyakwazi ukuhlangabezana ngokupheleleyo neemfuno zakho zokuzaliswa kwamanzi. Nokuba uhamba ngebhayisikile endleleni, ubaleka ulwandle, okanye uqeqesho kwindawo yokuzivocavoca. Ingasebenza njengoncedisi wakho wokuhambisa amanzi kwaye ikugcine uzele amandla ngamaxesha onke.
Ukomelela kwe-Eco Friendly ekumgangatho ophezulu kwiBhotile yaManzi yeZemidlalo
Ibhotile yamanzi ilungele zonke iintlobo zemidlalo yangaphandle. Ukuvulwa ngokubanzi kulungele ukuzaliswa nokucoca. Uyilo lweargonomic arc akukho lula ukuba lutyibilike. Uyilo lwemilomo yokutsala amanzi ikuvumela ukuba uzalise ngokukhawuleza amanzi.
Imidlalo yangaphandle yokuLungela iMvalo yeBhotile ephathekayo yeBPA Simahla
Sebenzisa izinto ezinobungozi kokusingqongileyo, ezingenatyhefu, kungekho livumba likhethekileyo, inqanaba lokutya, i-BPA-yasimahla, kunye nokhathalelo lwempilo yakho. Umzimba webhotile ubhetyebhetye, kulula ukuyikhama ibhotile, ukukhawulezisa isantya sokusela, kunye nokuzaliswa ngokukhawuleza. Umzimba webhotile uyilo olungatyibiliki kwaye akukho lula ukuwa. Kulula ukuyiphatha kwaye uhambe ngokukhuselekileyo.
UkuQeqeshelwa uQeqesho lweeBhayisikile ngaphandle kweBhotile yaManzi
Ibhotile yenziwe ngezinto ezisempilweni kwaye akukho livumba likhethekileyo. Imilo entle yenziwe ngobunono, kwaye imigca igudile, elingana nesandla. Isigqubuthelo sethuli esiyilelwe ngaphakathi ukukhusela umlomo wokutsala ungcoliseko. Umthamo we-750ml, ukuhlangabezana neemfuno zakho zokuhambisa amanzi. Ifanelekile kwimidlalo yangaphandle enjengebhayisikile, ukubaleka, ukunyuka intaba njalo njalo.
Ukomelela kwe-Eco Friendly ekumgangatho ophezulu ngebhotile ye-BPA yasimahla
Ingabambeka ngokugqibeleleyo kwirakhi yebhayisikile, kwaye inokudityaniswa kunye noobhaka abahlukeneyo. Umthamo omkhulu we-1000ml unokuhlangabezana neemfuno zokuhambisa amanzi nangexesha lokuzilolonga. Izinto ezinobungozi bendalo, ibhotile iyabhetyebhetye, ayinxibi, inqabile kwaye ayomelele. Ibhotile yamanzi enokuba yeyona nto incedisayo.
Iiplastikhi zesiselo esenziwe ngeplastikhi kwiibhotile zamanzi Ukunyuka kokuqina
Ibhotile yezemidlalo yangaphandle yenziwe ngokukodwa kwimidlalo yangaphandle. Ukuphatheka kwayo, ukusebenza kwayo kunye nokuqina kwayo kuyenza ilungele imidlalo emininzi. Njengokubaleka, ukukhwela, ukuhamba ngebhayisikile, ukomelela njalo njalo. Sebenzisa izinto ezinobungozi kokusingqongileyo, ezisempilweni nezikhuselekileyo, inokusetyenziswa ngokuzithemba. Yivumele inyuse uhambo lwakho lwezemidlalo.
Inombolo Inombolo: BTA035
Ingcaciso: 173 * 67mm
Umbala: ngentando umbala
Ukusetyenziswa: Imidlalo yangaphandle
Iibhegi zeSibo kunye neeSuitcases Fitings Co., Ltd. Jiniang
Ifowuni: + 86-595-85293575